Rehefa nitombo ny fifalian’ny enina dia nankamamy VHS iray lehibe noho ny hafa izy rehetra: ny zazalahy avy any Brezila. Ity horonantsary ity, izay nanasongadinana ny fiadiana ny amboara eran-tany Brezila tamin’ny taona 1930-86, no antontan-taratasy tonga lafatra tamin’ny fotoana
Tammy Abraham dia nanambara tamim-pahatsorana fa mitazona ny volavolan-kevitr’i Manchester City sy Liverpool ho an’ny amboaran’ny Premier League i Chelsea na eo aza ny fanombohany sarotra teo ambany fitantanan’i Frank Lampard. Eni Aluko Vakio bebe kokoa </p < Mbola misy
Aorian’ny mpitsidika Armeniana manetriketrika loatra eto, dia hanomboka hiady varotra amin’i Torino i Wolves amin’ny herinandro ambony miaraka amin’ny torino amin’ny sokajy ligin’i Europa League. Amin’izay fotoana izay dia hiharatsy tokoa ny raharaha; Rivotra mahafinaritra ity. Nuno Espírito Santo sy
Diego Maradona, izay nampivondrona ny firenena rehetra ho iray tamin’ity fahavaratra ity niaraka tamin’ny lokony mampihomehy any Russia. Nomeny ny rantsan-tànana ireo mpankafy mpanohitra. Natory tamin’ny lalao afovoany izy. Nofonosina izy, namboarina tamin’ny voaloboka fotsy, tao anaty boaty mpanatanteraka, nitaky
Mauricio Pochettino dia nilaza mazava fa tsy manantena ny hampatanjaka ny ekipany Tottenham izy amin’ny volana Janoary satria tsy manam-bola ny klioba noho ny vidin’ny kianjaben’izy ireo vaovao. United, izay te hanendry azy ho mpandimby an’i José Mourinho amin’ny faran’ny
ara-diplaomatika dia nisafidy ny hamadika ilay fanontaniana izy, milaza fa ho voatazona manokana amin’ireo mpanohana an’i Chelsea izy ho an’ny lohateny ligin-daza, Didier Drogba, John Terry ary ireo fahafinaretana rehetra nananany tamin’ny voalohany fotoana tao amin’ny Stamford Bridge, saingy mety
Taorian’ny fampiatoana fatratra indrindra tamin’ny famaranana rehetra, izay nipoiran’ny olon’i Angletera ho mpandresy amin’ny amboara Tompondaka Erantany dia nanolotra ny fankasitrahany tamim-pankasitrahana avy amin’ireo mpanohana azy ary ny kapitenin’izy ireo, Eoin Morgan, ary nifampizara nanantena fa hisy ny vaovao. Kivy
Novak Djokovic nilaza fa ny fitokisan-tena no fanalahidin’ny lohateny Wimbledon
Novak Djokovic niantso ny fandresena farany nataon’i Wimbledon an’i Roger Federer ho “lalao faran’izay lehibe amin’ny asany” taorian’ny nahitany fomba iray handresena ny mpifanandrina aminy sy ny valin’ny Fitsarana Afovoany izay be fanoherana azy. The Tonga tamin’ny alàlan’ny 7-6 (5),
I Lewis Hamilton dia nandresy tamin’ny F1 Grand Prix F1 anglisy tamin’ny fotoana fahenina
Nosoratan’i Helmet nandritra ny faran’ny herinandro niaraka tamin’ny sainam-piarahamonina, i Lewis Hamilton nahazo antoka fa izy ihany koa dia nitazona ambony teo ambony rehefa miakatra ny ambaratonga ambony amin’ny podium izy rehefa avy nandresy ny Grand Prix anglisy. Ny fandresena
Ny fomba nahatonga ny indostrian’ny filokana dia nanjary nifamatotra tamin’ny baolina kitra
Ary koa ny lobaka, ny orinasa dia manohana matetika mijoro na kianja. Stoke City dia fianakavian’ny Coates, izay manana an’i Bet365 ihany koa, noho izany ny kianja Bet365. Miaraka amin’ny fanakambanam-bato, izany dia midika fa ny logo filokana dia hita